Otu esi eme pasta ọhụrụ n'ụlọ: naanị ntụ ọka na akwa | Ntụziaka
Esi mee pasta ọhụrụ n'ụlọ
Ascen Jimenez | 19/03/2021 12:20 | Pasta Ezi ntụziaka
Kwadebe pasta ọhụrụ n’ụlọ esighi ike. Ihe ndi anyi choro bu nani abuo: ntụ ọka, akwa. Anyị ga-agwakọta ha ruo mgbe anyị ga-enweta ntụ ọka dị ka nke a hụrụ na foto ahụ. Mgbe ahụ, anyị ga - agbatị ya ruo mgbe anyị ga - enweta mpempe akwụkwọ dị ezigbo mkpa ma nye ya ọdịdị ahụ achọrọ.
Iji gbasaa ya, anyị nwere ike iji igwe na, ma, ọ ka mma nonna papera, nke bụ otu esi akpọ igwe ahụ akọwapụtara na Italytali. Igwe a na - enyekwa anyị ohere igbutu mgwakota agwa agbatịgoro, dịka ọmụmaatụ, n'ụdị tagliatelle.
Ị na-ere ntụ ọka pụrụ iche ịkwadebe onyinye ọhụrụ. Anyị na-ahụkwa akwa na yolk kachasị mmanụ na ahịa, zuru oke maka nkwadebe ndị a.
Icheta oke ntụ ọka na akwa dị mfe. Ọ bụ mgbe niile 1 egg kwa 100 g ntụ ọka. Mfe nri? Etinyela nnu, anyị ga-etinye ihe a n'oge na-adịghị anya, n'ime mmiri esi nri.
A na-esi nri mmiri dị ụtọ na mmiri dị nnu. Mgbe mmiri mmiri ahụ, tinye nnu ma hapụ ya ka ọ sie obere minit ole na ole (ọ na-ewe obere oge isi nri karịa pasta akọrọ). Ozugbo esi nri, anyị na-agbanye ya ntakịrị ma jiri ya fee ya ihendori anyi ọkacha mmasị.
Anyị ga-amụta otu esi eme pasta ọhụrụ n'ụlọ.
Ntụziaka ụdị: achịcha dị iche iche
400 g ntụ ọka maka pasta ọhụrụ
Anyị na-etinye ntụ ọka ahụ n'ime nnukwu efere ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'elu ala, na etiti, nsen.
Gwakọta aka gị nke ọma ma ọ bụ jiri ihe eji emepụta nri ruo mgbe ị ga-enweta bọọlụ nke mgwakota agwa.
Anyị na-agbasa mgwakota agwa na ala ma ọ bụ jiri igwe.
Anyị na-ebipụ mgwakota agwa ka anyị nwee mmasị, na nke a, n'ụdị tagliatelle.
Mgbe ahụ, anyị ga-esi nri nke mgwakota agwa na mmiri esi mmiri na obere nnu.
Anyị na-agbanye ya ntakịrị ma jeere ya ozi na ihendori kachasị amasị anyị.
Ozi na-edozi ahụ kwa na-eje ozi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Recetin » Ntụziaka » Pasta Ezi ntụziaka » Esi mee pasta ọhụrụ n'ụlọ
Salad ndị Russia na-enweghị poteto